Real Madrid oo guul rafaad ah ka gaartay Real Betis. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Real Madrid oo guul rafaad ah ka gaartay Real Betis.
Isniin, Janaayo, 14, 2019, (HNN) Real Madrid ayaa guul cidhiidhi ah ka soo gaadhay kooxda Real Betis iyada oo Dani Ceballos uu noqday xidiga Santiago Solari ka badbaaday babraro kale oo aanu sharaxaad u heleen kadib markii ay Real Betis la timid goolka barbaraha qaybtii labaad ee kulankan.
Real Madrid ayaa gaadhay guusheedii ugu horaysay ee sanadkan cusub ee horyaalka La Liga iyada oo waliba ka faa’iidaysatay in kooxda kaalinta afraad ka haysatay ee Alaves ayna guulaysan taas oo Los Blancos ka caawisay in ay kaalinta afraad ee La liga soo gashay.
Karim Benzema ayaa dhaawac gacanta ka soo gaadhay looga saaray kulankan iyada oo waliba Madrid kulanka soo socda la ciyaari doonta Sevilla wuxuuna Solari sugi doonaa xaalada Benzema iyo waliba xidigaha kale ee kooxdiisa dhaawaacyada badan kaga maqnaa.
Real Madrid oo guul rafaad ah ka gaartay Real Betis. added by admin on January 14, 2019